Abavelisi beRotc ukuwelda abavelisi - China Arc Welding Robot abathengisi kunye neFektri
Iirobhothi zothotho lweMOTOMAN-AR
Iirobhothi zothotho lweMOTOMAN-AR bonelela ngokusebenza ngamandla kwe I-arc welding izicelo. Uyilo lwembonakalo olulula lwenza ukuba kube lula ukufaka kunye nokucoceka iirobhothi, kwaye ilungelelaniswe ngokupheleleyo ukuba isetyenziswe kwiindawo ezibi. Uthotho lwe-AR luthotho lwemisebenzi yokuqhubela phambili kwaye iyahambelana neenzwa ezininzi kunye nemipu ye-welding.
Xa kuthelekiswa KWINKQUBO-AR2010 okanye Inqwelo-mafutha-MA2010, iphumelele ukukhawulezisa okuphezulu kwaye yenze igalelo elihle ekuphuculeni imveliso yabathengi.
210 ° / umzuzwana
220 ° / umzuzwana
435 ° / umzuzwana
700 ° / umzuzwana
Iirobhothi zewelding zeYaskawa Zisetyenziswa ngokubanzi kwishishini lezixhobo ze-laser, ishishini lezixhobo ezimajiko-jiko, icandelo lolawulo lwezixhobo, ushishino lwezixhobo zeshishini, izixhobo zokwenza izixhobo zehardware, izixhobo zeshishini lebhetri, kwaye sizibophelele ekuboneleleni ngabavelisi bezixhobo ngezisombululo ezihlanganisiweyo zolawulo lweshishini kunye neemveliso ezixhasayo. Igalelo ekuphuculeni ukusebenza ngokukuko, ukunceda iinkampani ukuphucula ukhuseleko kwimveliso, ukusebenza kwemveliso kunye nomgangatho wemveliso; ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla; ukukhuthaza inkqubo yophando lweerobhothi kunye nophuhliso kunye noshishino ukuze kuxhamle amashishini.
Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphatha ingalo yeRobot, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo,